Thiha Lu Lin: April 2016
Living with Love မေတ္တာဖြင့် ရှင်သန်သူ
ကျွန်တော့ စိတ်ရဲ့ ထွက်ပေါက်လေး တစ်နေရာကို အလည်ရောက်လာပေးလို့ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
ဗီယက်နမ်ခမောက်လေးဆောင်းလို့ နိုင်ငံအနှံ့ ဆိုင်ကယ်နဲ့ပတ်မယ် (၂)
လမ်းဘေးမှာ ရောင်းလေ့ရှိတဲ့ အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ
အမြဲလိုလို မြူဝေနေတတ်တဲ့ ဟနွိုင်းမြို့လေးဟာ ကလောမြို့လေးနဲ့ အလားသဏ္ဍာန်တူပါတယ်။ ဆောင်းတွင်းဆို အေးမယ့်ပုံလေးပါ။ ခု နွေရာသီသွားတာတောင် ရာသီဥတုလေးက နေပျော်ပါတယ်။ အရမ်းကြီးတော့ အေးမနေပါဘူး။ နေလို့ကောင်းရုံပေါ့။ Tour Package နဲ့ သွားတာမဟုတ်တော့ နောက်ကျတဲ့အထိ အိပ်မယ် စိတ်ကူးထားပေမယ့်လည်း ၈ နာရီမထိုးခင်ကို အားလုံးက နိုးပြီး အပြင်ထွက်ဖို့ တက်တက်ကြွကြွ ရှိနေပြီ။ ကျွန်တော့ အခန်းမှာက ဝရံတာ ပါတော့ မနက် နိုးနိုးချင်း လုပ်ဖြစ်တာက ဝရံတာထွက်ပြီး အနီးအနားက လှုပ်ရှားမှုလေးတွေ ဓါတ်ပုံရိုက်တာပါပဲ။ ရိုးရှင်းတဲ့ လူနေမှုပုံစံကို တွေ့ရတယ်။ နယ်မြို့တစ်မြို့ကို ရောက်သွားရတဲ့အတိုင်း ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကအစ ရိုးရှင်းတယ်။ ရိုးရာအစဉ်အလာကို ထိန်းသိမ်းလိုက်လျှောက်နေကြတဲ့ ပုံပန်းကို တွေ့ရတယ်။ အရင်က ပြောခဲ့သလို ပြားချပ်ချပ် အဆောက်အဦးတိုင်းရဲ့ မြေညီထပ်ဟာ ဆိုင်ခန်းတွေ ဖြစ်နေကြတယ်။ မနက်လင်းပြီဆိုတာနဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေ အနေများတဲ့ ဒီ Old Quarters မှာ ပျားပန်းခတ် လူတွေလှုပ်ရှားသွားလာနေကြတယ်။
Posted by Thiha Lu Lin at 5:52 PM 1 comments
မိုးကုတ်ကို တစ်ညအိပ် နှစ်ရက် ခရီးထွက်မယ်ဆိုရင်…
ကျွန်တော် ပြင်ဦးလွင်ကို ရောက်နေတုန်း၊ တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးသေးတဲ့ မိုးကုတ်ကို သွားဖို့ စီစဉ်လိုက်တယ်။ မိုးကုတ်က ပြင်ဦးလွင်ကနေဆိုရင် ၈၄ မိုင်လောက်ပဲ ဝေးလို့ ၃ နာရီ ခရီးပဲ ရှိတာမို့ တစ်ညအိပ်ခရီးသွားဖို့ လုံလောက်တယ်လို့ ထင်မိတာကြောင့်လည်း ပါပါတယ်။ မိုးကုတ်ကို သွားဖို့ ပြင်ဦးလွင်က လွင်မိုး (ပြင်ဦးလွင် - မိုးကုတ်) ဗင်ကားအသင်းနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး ကားစင်းလုံးငှားထွက်လာဖြစ်ခဲ့တယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ရှေ့ခန်း တစ်သောင်းခွဲ၊ နောက်ခန်း တစ်သောင်း စသဖြင့် ရှိတတ်ပေမယ့် ဟိုမှာလည်ပတ်တဲ့အခါလည်း ကားလိုအပ်နိုင်လို့ အသွားအပြန် တစ်ခါတည်း ငှားထားလိုက်ပါတယ်။
မနက်စောစောထွက်နိုင်ရင်တော့ မိုးကုတ်ကို ဝင်ချိန်စောလို့ လည်ဖို့ ပတ်ဖို့အချိန်ရပေမယ့် ကျွန်တော်ငှားတဲ့ကားက ဘရိတ်အသစ်လဲတယ်ဆိုပြီး ၁၀ နာရီလောက်မှ လာခေါ်နိုင်ပါတယ်။ ပြင်ဦးလွင်-မိုးကုတ်လမ်းက အရမ်းသာယာပြီး လမ်းပိုင်းတော်တော်များများ ကောင်းပါတယ်။ လမ်းစဦးပိုင်းမှာတော့ ကားနှစ်စီးရှောင်သာတဲ့ အနေအထားရှိပေမယ့် တော်တော်လေး ခရီးရောက်လာတာနဲ့ လမ်းက ကျဉ်းလာလို့ ကားနှစ်စီးရှောင်ရန် မလွတ်တဲ့အနေအထားဖြစ်လာပြီး တစ်စီးစီးက လမ်းဘေးနည်းနည်းချမောင်းရတတ်ပါတယ်။ ဟိုနား ဒီနား ကွက်လောင်နေတဲ့ တောမီးတွေကလည်း မိုးကုတ်နား မရောက်ခင်ထိပါပဲ။ တခါတလေ မီးခိုးတလူလူနဲ့မို့ ကားမှန်ဖွင့်မောင်းရင် မျက်စိထဲဝင်ပြီး စပ်လို့ မျက်ရည်ကျတတ်ပါတယ်။
Posted by Thiha Lu Lin at 11:22 PM0comments
ဗီယက်နမ်ခမောက်လေးဆောင်းလို့ နိုင်ငံအနှံ့ ဆိုင်ကယ်နဲ့ပတ်မယ် (၁)
လမ်းသွားရင် သတိအမြဲထားနေရတဲ့ ဆိုင်ကယ်မြို့တော်တစ်ခုပါပဲ။
ကျွန်တော် သီဟ ရဲ့ သင်္ကြန်အားလပ်ရက်ကိုတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ဗီယက်နမ်ဘက်ကို ထွက်ဖို့ စဉ်းစားထားခဲ့တာ ၂၀၁၆ ခုနှစ် နှစ်စကတည်းကပဲ။ သူငယ်ချင်း (၄) ယောက် ကြိုတင်စီစဉ်ခဲ့ကြလို့ ဖေဖော်ဝါရီလ အစပိုင်းကတည်းက လေယာဉ်လက်မှတ် ကြိုဝယ်ထားလိုက်တယ်။ Vietjet လေယာဉ်နဲ့ လက်မှတ်ကြိုဝယ်ပြီးသွားတာတောင် ဈေးနှုန်းက အသွား အပြန်အတွက် ၃၀၈ ဒေါ်လာလောက် ကျသင့်သွားတယ်။ ဗီယက်နမ်ကို ဧပြီ ၉ ရက်နေ့လောက်ထွက်ပြီး ၁၆ ရက်နေ့ ပြန်လာဖို့ဆိုတော့ ဟိုမှာ ၇ ရက်လောက် အချိန်ရသွားတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ မြို့တော်ဟိုချီမင်းနဲ့ ဟနွိုင်း မြို့နှစ်မြို့ကို လည်ပတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။
Posted by Thiha Lu Lin at 12:24 PM 1 comments
Yangon Splash Walk 2016 တွင် ပါဝင်ခြင်း
ဒီ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မြန်မာသင်္ကြန်မှာ ကျွန်တော်တော့ ထူးထူးခြားခြားအစီအစဉ်လေးတစ်ခုမှာ ပါဝင်ဖြစ်သွားတယ်။ ခရီးထွက်နေရာကနေ သင်္ကြန်မမီလောက်တော့ဘူး ထင်နေခဲ့တာ လေယာဉ်လက်မှတ်ပြန်ကြည့်တော့မှ သင်္ကြန်အတက်နေ့ နေ့လည် ပြန်ရောက်မယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတော့ ပထမဆုံးစဉ်းစားဖြစ်တာက မဏ္ဍပ်သွားဖို့ပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ သူငယ်ချင်း ဟိန်းဇော်ညိုက ရန်ကုန်မှာ Yangon Splash Walk ဆိုတဲ့ activity တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာလေးရေးထားတာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ်ကတည်းက အဲဒီ Event ရှိကြောင်းကို တွေ့နေမြင်နေရပေမယ့် အချိန်မီ၊ မမီ မသေချာလို့ Going မလုပ်ထားခဲ့မိဘူး။ သူငယ်ချင်း ဖိုးသားနဲ့ ကိုနေ တို့ကလည်း သွားမယ်ဆိုတာနဲ့ နောက်ဆုံး မဏ္ဍပ်မထိုင်တော့ဘဲ ဒီ Activity မှာ ပါဝင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
Water Splash Walk လှုပ်ရှားမှုရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က လွန်ခဲ့တဲ့ ၉၀ ခုနှစ်အစဦးတုန်းက ကလေးဘဝမှာ ခေတ်စားခဲ့တဲ့ လွယ်အိတ်ထဲ ရေပုံးထည့်ပြီး ရေပြွတ်တွေ၊ ရေသေနတ်တွေနဲ့ မြို့ထဲလမ်းတွေပေါ်၊ ရပ်ကွက်ထဲ လျှောက်သွားပြီး စစ်တိုက်သလိုပဲ ကိုယ်တွေလိုကလေးတွေ တွေ့ရင် ရေနဲ့ အပြိုင်ပက်ကြတာမျိုးကို ပြန်ပြီး အမှတ်တရ ဖော်ထုတ်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုလေးပါ။ မှတ်မိသေးတယ်။ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကလည်း စတီးပြွတ်တွေနဲ့ သိပ်ပျော်ခဲ့တာ။ အုန်းလက်မဏ္ဍပ်တွေနဲ့ ပြိုင်ပက်ရရင်တော့ မစားသာဘူးလေ။ ကိုယ်တွေ သူငယ်ချင်းအုပ်တောင့်ရင်တော့ တစ်ဘက်က အဖွဲ့ ခံပေရော့ပဲ။ ကိုယ်တွေ သူငယ်ချင်းအုပ်မတောင့်ရင်တော့လည်း ခံပေါ့။ ဒီ Water Splash Walk ရဲ့ ကျေးဇူးနဲ့ ဒီပုံရိပ်တွေက ဆေးရောင်စုံရုပ်ရှင်ဟောင်းတစ်ခုကို ပြန်ကြည့်နေရသလို အဝါရောင်ခပ်များများနဲ့ မျက်စိထဲ ပေါ်လာစေတယ်။
နေ့လည် ၁ နာရီလောက်မှ လေယာဉ်ဆိုက်တော့ အိမ်ကို အပြေးအလွှားရေချိုးပြန်ရတယ်။ ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချိန်းထားတဲ့ Sule Shangrila ကို အရင်သွား၊ အဲဒီကနေမှ စုရပ်နေရာဖြစ်တဲ့ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်းပေါ်ကို အပြေးလာရတယ်။ နေ့လည် ၃ နာရီလောက်မှ လူအုပ်က ခပ်များများဖြစ်နေပြီ။ အားလုံးက ရေသေနတ်လေးတွေကိုယ်စီနဲ့၊ အရက်မူးနေပုံ မရှိဘဲ ပကတိဖြူစင်နေတဲ့ ကလေးငယ်တွေရဲ့ ပုံရိပ်မျီုးတွေက အားလုံးမှာ တွေ့ရတယ်။ ဝတ်စုံအဆန်းအပြားလေးတွေနဲ့ တွေ့ရသလို၊ ရေသေနတ်မပါသူတွေကလည်း ရေသန့်ဘူးကို ထိပ်ဖောက်ပြီး ရေသေနတ်လုပ်လို့ ရေဆော့နေကြတယ်။ မကြီးစန်း တို့ ကိုပြည်စိုးအောင် တို့လို Celebrities တွေလည်း တွေ့ရတယ်။ သူတို့ဆိုလည်း လူတိုင်းက ချစ်ခင်စွာနဲ့ ဓါတ်ပုံ ဗီဒီယိုတွဲရိုက်သမျှကို ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ လိုက်လျောလုပ်ဆောင်ပေးရှာပါတယ်။
အစီအစဉ်အရ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အထင်ကရ သမိုင်းဝင်အဆောက်အဦးတွေနဲ့ Splash Walkers တွေ တွဲဖက် အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးဖို့ရှိတယ်။ ဒီအစီအစဉ်မှာ ရေသေနတ်တွေကိုယ်စီနဲ့ စုရပ် မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်းကနေ ပန်းဆိုးတန်းတစ်လျှောက်၊ ပြီးတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ အနော်ရထာလမ်း၊ သိမ်ဖြူလမ်းနဲ့ ကုန်သည်လမ်း၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းကနေမှ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်းကို ပြန်ဝင်ရမှာပါ။ အဲဒီလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ လွတ်လပ်ရေးကျောက်တိုင်၊ မြို့တော်ခန်းမ၊ တရားလွှတ်တော်၊ လောကနတ်ပြခန်းအဆောက်အဦ၊ ဝဇီရာရုပ်ရှင်ရုံ၊ စိန့်မေရီဘုရာျးေကျာင်း၊ ဗဟိုပုံနှိပ်တိုက်၊ ဝန်ကြီးများရုံး၊ ဗဟိုစာတိုက်ကြီး၊ Strand ဟိုတယ် စတဲ့ သမိုင်းဝင်အဆောက်အအုံတွေကို နောက်ခံထားပြီး အမှတ်တရဓါတ်ပုံရိုက်ကြပါတယ်။
လမ်းတစ်လျှောက်လည်း ရေလိုအပ်ရင်ဖြည့်ပေးဖို့ ရေဖြည့်တဲ့ကားတွေ စီစဉ်ပေးထားသလို၊ ငယ်ငယ်ကလိုပဲ တွေ့ကရာ အုန်းလက်မဏ္ဍပ်၊ မဏ္ဍပ်ကြီးတွေမှာ အားမနာတမ်း ရေတောင်းပြီးလည်း ဖြည့်ကြပါတယ်။
လူပေါင်းရာချီလို့ တညီတညွတ်တည်း လျှောက်သွားနေကြတာကို အချို့ကလည်း ဆန္ဒပြသလားပေါ့။ ဝိုင်းအုံကြည့်ကြ၊ ဓါတ်ပုံနဲ့ ဗီဒီယိုတွေ ရိုက်ကြနဲ့။ ရီလည်း ရီရပါတယ်။
ရဲ အချို့ရဲ့ စစ်ဆေးမေးမြန်းတာတွေလည်း ခံခဲ့ရသလို၊ ယာဉ်ထိန်းရဲတွေ နဲ့ ရဲတွေရဲ့ အကူအညီပေးမှုကိုလည်း ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ညနေ ၆ နာရီ ရေပိတ်ချိန် ကွက်တိလေး မူလစုရပ်နေရာပြန်ရောက်ပြီး အားလုံးချစ်ခင်စွာနဲ့ သင်္ကြန်သီချင်းလေးတွေဆိုလို့ လှုပ်ရှားမှုလေးကို ရပ်နားပါတယ်။ ပြီးတော့ အမှိုက်ကူကောက်ပေးတဲ့သူတွေကလည်း အမှိုက်လေးတွေကို ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် ပြန်လိုက်သိမ်းဆည်းပေးကြပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်မျိုးလေးတွေ နှစ်တိုင်းပြုလုပ်ပေးနိုင်ရင် ကောင်းတယ်လို့ ကျွန်တော်တော့ ထောက်ခံမိပါတယ်။ တစ်ခုပဲ အရင်ကလို လမ်းတိုင်း ရပ်ကွက်တိုင်းမှာ အုန်းလက်မဏ္ဍပ်တွေ ရှိမနေတော့တာမို့ ရေတော်တော်နဲ့ မစိုနိုင်တာကတော့ ခက်ပါတယ်။ ထူးခြားတဲ့ အစီအစဉ်ထူးလေးတွေ ထပ်ပေါင်းဖြည့်ထည့်ပေးနိုင်ရင်တော့ ပိုကောင်းမှာပါ။ ခုထိကတော့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ရေသေနတ်ကိုင်လမ်းလျှောက်ပြီး သမိုင်းဝင်အဆောက်အဦးတွေနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ရတာကလွဲရင် သိပ်ပြီး ထူးခြားမှု မရှိသေးလို့ ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိမယ့် အစီအစဉ်လေးတွေကို စနစ်တကျ သေသေသပ်သပ်လေး ရေးဆွဲလို့ နောက်နှစ်တွေမှာ ပိုပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
၁၇ ဧပြီလ ၂၀၁၆
Posted by Thiha Lu Lin at 12:20 AM0comments
Labels: Articles, Travel and Living
ဆလုံရွာ မကျုံဂလက် နဲ့ လန်ပိကျွန်းတွေဆီကို
အိပ်မက်ထဲမှာပဲ ရေကူးကောင်းတဲ့ ကျွန်တော်
အိပ်မက်ထဲမှာပဲ ရေကူးကောင်းတဲ့ ကျွန်တော်က မနေ့က ပင်လယ်ထဲမှာ လန့်ခဲ့တဲ့ အလန့်လေးနဲ့ ဒီမနက်မှာ စောစောလေး နိုးလာခဲ့တယ်။ Guide က မှာလိုက်တယ်။ မနက်ကို အစောဆုံး Boat Ferry နဲ့ လိုက်လာပါဆိုတော့ ၆ နာရီလောက်ထ ရေမိုးချိုးပြီး ၇ နာရီလောက်မှာ ဟိုတယ် မနက်စာကို ဆင်းစားလိုက်တယ်။ ထိုင်းအချိန် ၈ နာရီက မြန်မာအချိန် ၇ နာရီခွဲမို့ ကိုယ်မနက်စာ စားပြီးချိန်နဲ့ အဆင်ပြေပြေပဲ သင်္ဘောထွက်ချိန်မီသွားတယ်။ လှေဆိပ်မှာက အမြဲလိုလို ရနောင်းသွားမယ့် လှေ နဲ့ ကော့သောင်းသွားမယ့် လှေ တွေ တစ်ချိန်တည်းထွက်ကြတော့ ဘယ်ဘက်ကနေ ဆင်းရမလဲဆိုတာ လမ်းညွန်တွေ သေချာဖတ်ရတယ်။ တစ်ခါတလေလည်း ရေးထားတာနဲ့ တလွဲစီ။ ခုလည်းကြည့် ရနောင်းသို့ ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်နေရာကနေ ဆိပ်ခံဘောတံတားကို ဆင်းပြီး ရနောင်းသွားမယ့် Speed Boat ကို ကျော်ခွလို့ ဘေးချင်းယှဉ်ရပ်ထားတဲ့ ကော့သောင်းသွားမယ့် Speed Boat ကို တက်ရတယ်။ ဒီမနက်က လူရှင်းနေတော့ လူ ၈ ယောက်လောက်နဲ့ ကော့သောင်းကို ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ စရောက်တဲ့နေ့က ရိုးရိုးစက်လှေအကြီးစားပဲ စီးခဲ့ရတော့ ၁၅ မိနစ်လောက် ကူးရပေမယ့် ခုလို Yamaha ၂၅၀ စက်နှစ်လုံးအားနဲ့ Speed Boat ကတော့ ၅ မိနစ်လောက်အတွင်း ကော့သောင်းကို ခေါ်သွားပေးပါတယ်။ ဟိုနေ့က ညနေဘက်မှ ရောက်တော့ ကော့သောင်းဘက်ကို မမြင်ရဘူး။ ခုမှပဲ ကော့သောင်းရဲ့ ဆိပ်ကမ်းနဲ့ ဘောတံတားအလှတွေ၊ ကြိုဆိုရေးဆိုင်းဘုတ်တွေကို မြင်တွေ့ခွင့်ရတယ်။
Posted by Thiha Lu Lin at 2:25 AM 1 comments
ရေငုပ်ရင်း ပင်လယ်ကြီးရဲ့ လျို့ဝှက်ချက်တွေကို ဖော်ထုတ်ရအောင်
သွားနေတုန်း Guide က မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ ကျွန်းတွေကို တတ်နိုင်သမျှ လိုက်မှတ်ရတယ်။
နေပူတာနဲ့ ပင်လယ်လေ ပေါင်းပြီး လူကို အသားမည်းသွားစေမယ်မှန်း သိသိရက်နဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ အလှတရားကို အားပါးတရ ခံစားဖို့ ကျွန်တော် လှေဦးဘက်မှာထိုင်လို့ ဟိုဘက်ဒီဘက် ငေးမောမဆုံးကြည့်နေမိတော့တယ်။ ဘေးမှာ ပါလာတဲ့ Regional Guide ကိုကျော်ကျော်ဟန်ကလည်း အားပါးတရ ရှင်းပြပေးတယ်။ လက်ညှိုးထိုးပြီး ဟိုးကျွန်းက ဘာပါ။ ဘယ်လိုမျိုးပါ။ စသဖြင့် ရေပက်မဝင်အောင် ရှင်းပြပေးသလို၊ တစ်ခါတလေ အားမလိုအားမရ အတင်း ကြည့်ခိုင်းတတ်တယ်။ တစ်ခါတလေ သူပြောပြတာက ကျွန်းတစ်ခုအကြောင်း ကိုယ်မြင်နေတာက တခြားကျွန်းတစ်ခုနဲ့ နောက်မှ ဟိုကျွန်းလား ဒီကျွန်းလား ပြန်မေးပြီး ရယ်လိုက်ရတာ။
Posted by Thiha Lu Lin at 12:07 AM 1 comments
သူဌေးကျွန်းမှာ ဘာတွေရှိလဲ၊ ဘယ်တွေသွားရမလဲ?
ပင်လယ်ကြီးထဲက ရှုခင်းတွေကို ကြည့်ရင်း လတ်ဆတ်တဲ့လေကို တဝကြီးရှုရှိုက်ဖို့
ညက အိပ်မက်ထဲမှာတော့ ကျွန်တော်က ဆလုံကောင်လေး တစ်ယောက်ပေါ့ဗျာ။
မနက်စောစောလေး သံပတ်ပေးထားလို့ မနက် ၆ နာရီလောက်မှာ နိုးလာတယ်။ ဘေးက လိုက်ကာကြီးကို ဆွဲဖွင့်လိုက်တာနဲ့ မနက်ခင်းလေးမှာ လူကို လန်းဆန်းသွားအောင် မှန်ပြတင်းတံခါးတစ်ဘက်က ပင်လယ်ကြီးနဲ့ ခပ်ဝေးဝေးမှာ ရေးရေးမြင်ရတဲ့ ကျွန်းတွေက နှိုးဆွနေတယ်။ ဒီနေ့ မြိတ်ကျွန်းစုခရီးစဉ်မှာတော့ Regional Guide ကိုကျော်ကျော်ဟန်က တာဝန်ယူပို့ဆောင်ပေးမယ်ပြောပါတယ်။ မနက် ၇ နာရီခွဲလောက် ဟိုတယ်က စားသောက်ဆိုင်မှာ မနက်စာ စားရတယ်။ မနက်စာ နိုင်ငံတကာဘူဖေးက မဆိုးဘူး ပြောရမယ်။ အရမ်းကြီး နိုင်ငံစုံအစားအစာတွေ မရှိပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေ သဘောကျမယ့် ထမင်းဖြူ နဲ့ ဟင်း ၅ မျိုးလောက်၊ ဆန်ပြားကြော်၊ ဟင်းချို စတာတွေ ပါဝင်သလို၊ ဥရောပစတိုင်၊ အမေရိကန်စတိုင် မနက်စာတွေ စားဖို့လည်း တည်ခင်းပေးပါတယ်။ ကြက်ဥကြော်အတွက် စားဖိုမှူးတစ်ယောက် တာဝန်ယူပြင်ဆင်ပေးသလို၊ ဆန်ပြုတ် ဒါမှမဟုတ် ဂျပန်ခေါက်ဆွဲလိုဟာမျိုးလည်း ရှိသေးပြန်တယ်။ အသီးအနှံ စားချင်သူတွေအတွက်လည်း သစ်သီး ၃ မျိုးလောက် စိတ်ပေးထားသလို၊ နိုင်ငံတကာပုံစံ သီးရွက်သုပ်စားချင်ရင်လည်း ၃ မျိုးလောက်ကို sauce နဲ့ dressing ၃ မျိုးလောက်နဲ့ တည်ခင်းပေးပြန်ပါတယ်။ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်နဲ့ အအေးမျိုးစုံလည်း ရှိသေးပြန်တယ်။
Posted by Thiha Lu Lin at 11:21 PM0comments
ကော့သောင်းနဲ့ သူဌေးကျွန်းကို အလည်သွားမယ်
ကျွန်တော်က ခရီးသွားရင် Tour Agent တွေက သွားရင် စိတ်ညစ်တတ်တယ်။ အဓိကက သူတို့ရဲ့ အချိန်ဇယားတိုင်း သွားရတာကို မကြိုက်လို့။ တစ်ဘက်က ကြည့်ပြန်တော့လည်း Tour Agent တွေ ဆွဲသားပေးတဲ့ အစီအစဉ်တွေက ကိုယ့်အတွက် အချိန်မလင့်စေဘဲ၊ ဒေသတစ်ခုရဲ့ မသွားမဖြစ် ရောက်သင့်တဲ့နေရာအားလုံးကို စုံစုံလင်လင် ရောက်ရှိသွားစေတယ်။ သိသင့်သိထိုက်တဲ့ ဒေသန္တရဗဟုသုတလည်း ကိုယ်ရလိုက်တယ်ပေါ့။ ဒါကလည်း သူတို့စီစဉ်ပေးတာ ကောင်းဦးမှပါ။ အဆင်မချောတဲ့ Tour Agency တွေနဲ့လည်း သွားဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဒီတစ်ခါ အားလပ်ရက်နည်းနည်းလေး ရတာနဲ့ သွားချင်စိတ် တစ်ခါမှ မဖြစ်ဖူးခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တောင်ဘက်အစွန်းဆုံး ကော့သောင်းမြို့နဲ့ သူဌေးကျွန်းဘက်ကို ထွက်လာဖြစ်ခဲ့တယ်။ ခရီးသွားဖို့ စိတ်ဝင်စားစရာတွေ ပြည့်နေတဲ့ နေရာတစ်ခုမှန်း သိလိုက်ရလို့လည်း သွားဖို့ စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ ကိုယ်မရောက်ဖူးတဲ့ ဒေသမို့ Tour Agency တွေကို အားကိုးရပြန်တယ်။ Tour Diamond ရဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့ မနက်မှာ ခရီးစတယ်။ မနက် ၉ နာရီခွဲ ရန်ကုန် - ထားဝယ် - ကော့သောင်း MNA လေယာဉ်နဲ့ ဆိုပေမယ့် ထုံးစံအတိုင်း ဒီဘက်ခရီးစဉ်နောက်ကျပါတယ်။ ၁၀ နာရီခွဲမှ ထွက်နိုင်ပါတယ်။ ရန်ကုန်ကနေ ထားဝယ်ကို မိနစ် (၄၀) ပျံပြီး၊ ထားဝယ်ကနေ ကော့သောင်းကို (၄၅) မိနစ် ကြာပျံပါတယ်။ ထားဝယ်မှာ ခဏနားချိန် ၁၅ မိနစ်လောက်ကို ထည့်တွက်ရင် တစ်နာရီနဲ့ မိနစ် (၄၀) ကြာတဲ့ ခရီးပါ။
Posted by Thiha Lu Lin at 12:45 AM0comments
“သင်တို့သည် ဆုကျေးဇူးကို ရမည်ဟု ယုံကြည်သောစိတ်နှင့် ဆုတောင်းသမျှတို့ကို ရကြလိမ့်မည်။” - မာကု ၁၁:၂၄
“Whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours.” – Mark 11:24
“ကိုယ့်စိတ်ကူးအိပ်မက်ကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် မတည်ဆောက်ရင်တော့ အခြားလူတွေက သူတို့ရဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကို တည်ဆောက်ရာမှာ ခင်ဗျားကို အသုံးချသွားပါလိမ့်မယ်။”
– Dhirubhai Ambani, Founder of Reliance Capital
ကျွန်တော့ရင်ဘတ်က အချစ် "ပိုး"
တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ တိုးလို့ ကိုက်ခဲ ဆေးသောက်မပျောက်တဲ့ ငါ့ရင်ဘတ်ထဲ... တဆစ်ဆစ်နဲ့ ငြိလို့တွယ်လည်း... ငါလေ ပျော်ရွှင် မျှော်လင့်ခဲ့တယ် ...
Valentine's Day နီးလာတော့ ချစ်သူစုံတွဲလေးတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ တစ်ဦးကို တစ်ဦး ဖြူစင်တဲ့ မေတ္တာပြဖို့ ပိုပြီး ဆန္ဒပြင်းပြလာကြပါတယ်။ နွေးေ...
ချစ်သူတွေ မထင်မှတ်ဘဲ လမ်းခွဲဖြစ်သွားကြတာတွေ များပါတယ်။ သေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် တကယ်ကို ဘာမဟုတ်တဲ့ ကိစ္စရပ်လေးတွေပါ။ အသေးအဖွဲလေးတွေကို ဂ...
ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ကျွန်တော်က မင်းသား မင်းသမီးတွေကို အစွဲအလမ်းထားလေ့ သိပ်မရှိပါဘူး။ အဆိုတော်တွေဆိုလည်း ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် သီချင်းအဆိုကောင်းရင်၊ သူတို့ဆိုတဲ့ ...
ဗီယက်နမ်ခမောက်လေးဆောင်းလို့ နိုင်ငံအနှံ့ ဆိုင်ကယ်...
ရေငုပ်ရင်း ပင်လယ်ကြီးရဲ့ လျို့ဝှက်ချက်တွေကို ဖော်ထ...
NUG က နိုငျငံတဈဝနျး တျောလှနျရေးစတငျပွီဖွဈကွောငျး အရေးအပျေါအခွအေနကွေညော
Feliz Navidad- Cover
ဒီဇငျဘာဘလော့ဂျမှသညျ ... နိုဝငျဘာနှငျးဆီသို့
Food Review: ပုရစ်ကြော်
မောင်တိုင်ပင် ဧ။် အတွေးပုံရိပ်များ
ကျေးဇူးပဲမေ မေ - ရတနာဦး - Karaoke
Pyae Phyo (MMiTD)
♪ ဖုန်းထဲမှာ Window 10 Style နဲ့လန်းချင်သူများအတွက် - SquareHome2Premium – Win 10 style v1.5.5 Apk (21-Nov)♫
" မဟာကရုဏာရှင်"၆ရက် နိုဝင်ဘာ၂၀၇ခုနှစ် ဒီလှိုင်းစာစောင် အတွဲ(၆) အမှတ်(၄၃)မှ
Optimistic, Love and Life
Out Of The Teak Closet | – blog ofasingle gay man in Myanmar
အမျိုးသား နှစ်ဦး၏ မင်္ဂလာသက် (၁၀) နှစ်ပြည့် အခမ်းအနား
သမ္မာကျမ်းစာမှ လက်ရွေးစင် ပုံဝတ္ထု (၁၄)
NMFA Scholarship 2013
Heiny Without A Back Space
Warmly welcome to Kyaukme
Copyright (c) 2011 Thiha Lu Lin. Design by web design elmhurst il - inmotion hosting review, Drugstore Online, Coupon Websites